Ahoana no mba hanaisotra ny holatra refin-: mihandrona mangirana eo amin'ny tarehy? – Jannah News
Home/Acne/Ahoana no mba hanaisotra ny holatra refin-: mihandrona mangirana eo amin'ny tarehy?
vehivavy – ny maha-zavaboary,
ny loharanon'ny heriny ny famoronana.
Te-manala ny stains, holatra sy ny refin-holatra rehefa tenanao?
Hello, mpamaky malala ao amin'ny bilaogy!
Ho tohizana ny resaka momba ny lohahevitra momba ny lahatsoratra-refin- (vokatry ny pustules). ankehitriny, holazainay, ny fomba manala ny holatra refin-any an-trano ary hizara ny fomba fahandro mahomby indrindra saron-tava. ary, Ho isika haneho ny zava-miafina, ny fomba manafina ny lesoka amin'ny mahaforona.
Ny lahatsoratra hanampy anao manala ny lavorary! Mitoera atỳ aminay, ary tia mamaky.
Mahatoky ny ankamaroan'ny fomba hatao manala ny stains sy ny holatra
Ahoana no hanaovana saron-tava ny post-refin-trano?
Mamaivay ny hoditra foana hahatonga antsika tsy mahafinaritra ny fihetseham-po. indrindra, rehefa manana vokany, ka hamela ambadiky ny "fampahatsiahivana" ao amin'ny endriky ny holatra na kinifinify eo amin'ny hoditra. Miezaka isika ny tsy hanaisotra azy. ankehitriny, dia hizara aminareo toro-hevitra, izay hanampy anao mba hanala ny holatra ao an-trano.
Mety toa, fa ny tena madio Lahatsoratra-refin-- dia tsy azo. na izany aza, Raha ny fotoana mba hanomboka hanao ny fomba - ny zavatra rehetra azo atao, satria ny vaovao holatra mba hitondra mora kokoa!
Fahaiza-fomba ny fampihenana holatra:
Excellent miady amin'ny post-refin-tarehy savoka. Method ny fampiharana Tena tsotra: fananana Ketraka, pointwise fangatahana dia nesoriny tsy Hamainina. Dia tandremo tsara ny hampihatra ny moisturizing fanosotra.
Azonao atao ny mividy izany eto .
Bleaching - fomba lehibe mba hanesorana taona toerana, ampahazavao ny mazoto holatra. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fampiasana makiazy manokana, sy ny fampiasana saron-tava, dia afaka mora foana ho ao an-trano.
fomba fanamboarana menaka, scrubs sy ny saron-tava no afaka mamaky amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Bleaching koa dia manampy ny hoditra eny, avy feo, manao izany mitovy tantana, velvety.
Fanorana amin'ny menaka tarehy. Ny soa azo amin'ny endrika otra afaka miresaka tsy misy farany! Rehefa dinihina tokoa, dia manampy hampihena fahanterana, Izany feo ny dermis, smoothes hoditra. Ny menaka tarehy, dia afaka manampy 1-2 mampisavoana ny Etera.
ohatra: 1 sotrokely amygdala menaka sy 2 mampisavoana ny hazo dite menaka, kininina, Rosemary. Hetsika milamina hamafàny fifangaroana ny fanorana andalana.
Fifehezan 'ny menaka, tahaka ny fantatrareo ihany, tena ilaina, zavatra, izay ahitana ny Etera haingana metabolism, haingana ny sela fiterahana indray sy ny Voalaminay epiderme.
Darsonval fitaovana - Hanampy anao hanaisotra stains. Noho ny kely herinaratra may ny antontam, tsara izy miasa eo amin'ny dermis. pulses, amin'ny alalan'ny nozzles, tonga ny epiderme. Ary ny bakteria no maty, miala mamaivay.
Darsonval fikorianan'ny ra ihany koa ny accelerates. Systematic fampiasana mampihena ny mariky ny holatra, holatra. Manatsara ny toe-piainana koa ny dermis amin'ny ankapobeny, manomboka ny dingana fiterahana indray, dia mampiasa ny famokarana collagen, elastin, gilaurona.
Miaraka amin'ny menaka, lotions, scrubs - dia hahazo vokatra tena tsara! fahafahana Buy fitaovana Darsonval .
Tena ilaina ny manao lotions amin'ny cider vinaingitra sy ny voasarimakirana. Ary tsy whitens, fa mampirisika ihany koa ny fanasitranana haingana ny sela, accelerates fiterahana indray, smoothes ny epiderme, Manome fihenjanan'ny resaoro.
ento ny vitaminina, indrindra, A sy ny S. Courses in 2 -bolana. Manampy ny fanatsarana ny hoditra toe-. ihany koa, misotro rano ampy.
Arovy ny hoditra avy amin'ny taratra UV -inache dia hanangana toerana maizina, fa, tsy mety, mandravaka fijery. indrindra, raha manao asidra peels na mampiasa menaka manan-danja ny volomboasary, voasary makirana, grapefruit.
View, toro-hevitra tena tsotra! Ara-potoana firosoana amin'ny fitsaboana - no Vahaolana, manaiky? Ao an-trano, dia afaka manala ny post-refin-.
Tianao ve ny hampiasa efa ananana pahasalamana mpiasa, Mankanesa ao amin'ny fivarotam-panafody marika fivarotana an-tserasera Pharmacosmetica .
Mazava ho azy, raha misy tranga mafy: lalina holatra, manana unhealed mamaivay, ary subcutaneous fanabeazana - tsy hanenenana mba hitsidika ny hoditra. Hery miasa mangina dia tokony sitrana epiderme, tsy hita maso sy ny famantarana ny mamaivay suppuration.
Zava-miafina ny make-up, izay hanampy anao manafina ny holatra:
Ampiharo eo amin'ny hoditra primer, dia hanampy mba hampifanaraka ny fanampiana.
bebe kokoa, mampiasa borosy manokana na ny sponjy Ampiharo concealer. Tsy ilaina ny manao ny coating matevina loatra! Mety clog masonkoditra sy mainka nampahaditra ny zava-misy.
Ao amin'ny faritra simba, mampihatra concealer, dia hanampy azy ireo mba hanafenana
Afeno ny redness fanampiana maitso concealer, dia tsara manao very. Hampihatra izany tokony Miravaka ny borosy.
Fix makiazy mampiasa vovoka.
Tsarovy ny fitsipika: dia tsy ilaina ny zarao ny maso na ny molotra. Tsara ny manao kely lantom-peony amin'ny volomasony, molotra dia tokony hampihatra lokomena na alokaloka nyudovogo gloss, maso dia afaka mitondra pensilihazo kely mainty.
Mampiasa foana kalitao, notsapaina makiazy , izay no mahatonga ny allergie na tsy fahazakana.
Misy toerana tena tsara, fa afaka mahandro sakafo ao an-trano. Hanampy anao izy ireo mba hanamaivanana mangidihidy, ary haingana fikorianan'ny ra sy ny fiterahana indray. Mariho ihany koa ianao, ny hoditra dia hamirapiratra amin'ny hatsaran-tarehy sy ny fahasalamana.
tena zava-dehibe, tsarovy - Izay manao saron-tava, Peel sy mampihatra tsy tapaka ny fanosotra dia tokony, raha izany, ny vokatry ny fitsarana dia tsy.
Tsy maintsy manana faharetana, araka ny tokony mamokatra ampy collagen, iza no afaka mameno ny faritra simba. Cosmetic vokatra dia tsy manampy fotsiny manala ny holatra, fa koa mba tsy refin-.
Saron-tava tamin'ny tanimanga ny koa ny ethers manampy hanatsara hoditra toe-, haingana fiterahana indray. Tena zava-dehibe, mba hamokarana collagen sy ny elastin. Raha ny marina, ireo singa roa ireo tompon'andraikitra ny fihenjanan'ny resaoro ny hoditra.
esters (Rosemary, lavender, manuka, voasary makirana) tsy haingana fikorianan'ny ra, fa mampirisika ny fanasitranana haingana ny post-refin-.
Clay - Manalefaka, Izany manadio amin'ny masonkoditra sy moisturizes. Add ny diloilo ao amin'ny fotsy na maitso tanimanga mba moramora - dia ho ampy 1-2 nilatsaka.
Tantely sy havozomanitra - hanao malefaka dermis, silky, mamelona sy moisturize. Tantely - ny mahagaga vokatra, Mandray soa avy izay maro ny aretina, ary matetika ampiasaina ho an'ny tanjona tarehy. Kanelina - Mahafaly ny hoditra, Tsy Natomboka ny metabolism.
tarehy ranomandry - dia tena mora ny hiomana! Dia ilaina ny maka ny persily, hotetehina mitetika azy (na hanapaka ao amin'ny blender) handatsaka rano mangotraka, aoka labiera ary manidina ho amin'ny teny manokana for ranomandry. Tena ilaina namaoka ny havany amin'ny ranomandry tao an-marain-tsy hariva. Ny maraina - fomba izany no hampifaly, hariva - hanamaivana ny harerahana sy ny adin-tsaina rehefa avy niasa.
Badyaga amin'ny hydrogène peroxyde - mahomby vahaolana, izay manampy ny hampifanaraka ny hoditra, hanafoana mamaivay sy hahamaivana ny fahorian'ny mangidihidy. Recipe saron-tava eo ho eo ny: 1 tanimanga sotro, 1 sotro sy ny concoctions 4 mampisavoana ny hydrogène peroxyde 3%.
Fanteno ny tena tiany ianao ny saron-tava ny lahatsoratra-refin-ary manao izany isan'andro. Tsy very maina koa ny hampiditra ao ny fikarakarana sy ny ranomandry nisafo paraffin. Complex fitsaboana sy fikarakarana hoditra mitandrina tsara mba hanampy anao hiatrika ny famantarana ny refin-.
Ampiasao organika makiazy , maneno kojakojany vitaminina .
raha, Rehefa afaka 2-3 volana dia hahatsikaritra fiovana hita, tokony hijery hoditra na beautician. Tandremo ny tenanao, mikarakara ny hoditra amin'ny fotoana rehetra, - ary dia misaotra anao!
Fiompiana mampanahy ny foto-kevitra rehetra ny refin-, Ho isika hianatra momba ny antony mahatonga ny ny fijery, ny fomba hitondrana azy ireo sy izay mba hiantso vonjy.
Farany, ankehitriny nihaona tamin'ny fomba, fomba handresena Lahatsoratra-refin-ao an-trano. Recipes saron-tava isan-karazany ny tena fikarakarana sy manao ny hoditra malefaka sy silky.
Tadidio - tsara tarehy ianao!
Subscribe to ny bilaogy, mba abreast rehetra ny vokatra vaovao avy amin'izao tontolo izao ny hatsaran-tarehy, ny fahasalamana sy ny famoronana.
Zarao ny fanazavana amin'ny namanao, fa ity lohahevitra ity dia ny mampanahy ny maro.
Hahita anao tsy ho ela!
Satria ianao dia Ilona
Raha lahatsoratra ity dia manampy anao, mankasitraka azy io - fahazavana ny fo)))
Folk fanafody for refin-- 10 Mahomby fomba fanamboarana for an-trano
Ahoana no mba hanaisotra ny refin-ho 24 ora